I-MarketingPilot: Ukuphathwa Kokumaketha Okuhlanganisiwe Kwe-Microsoft Dynamics | Martech Zone
IMicrosoft Dynamics CRM futhi I-MarketingPilot ikunikeze ukuqonda okudingayo ukuze uqonde kangcono amakhasimende akho. Ngokuziphatha okunamandla nokumaketha analytics, ungakhomba kalula futhi uhlukanise amakhasimende akho, uqonde ukuthi bathakazelani, bese uwabandakanya ngesikhathi esifanele ngomyalezo ofanele. IMicrosoft Dynamics CRM neMarketPilot iletha ezentengiso zokuzenzekelayo nokuphathwa kwemikhankaso eminingi.
Ukuphathwa kwezentengiso okuhlanganisiwe - Yenza futhi uhlele imisebenzi yakho yokumaketha ngamathuluzi wokuphatha anamandla, wokuphela kokuphela aklanyelwe ukusiza amabhizinisi nama-ejensi ukuhlela, ukwenza, nokulandelela ukumaketha kwabo kahle.
Ukuphathwa kwemithombo yezokumaketha - Gcina amaqembu akho esebenzisana futhi uqiniseke ukuthi izinsiza ezifanele zikumaphrojekthi alungile.
Ukubhajetha - Thola ukuqonda kwesikhathi sangempela kusabelomali semikhankaso nokumaketha, futhi ubikezele ngokunembile.
Ukuphathwa komkhankaso - Qondanisa kangcono nokuthengisa futhi uthuthukise ukusebenza nge-automation ye-multi-channel yangempela.
Ukuthenga kwemidiya nokuhlela - Hlela, qhathanisa, futhi uhlanganise ibhizinisi lakho lokuthenga imidiya kalula kunakuqala.
Izixazululo ze-Agency - Idizayinelwe ukusebenza ngokugcwele, ukuthengwa kwemidiya, ukudala, ukukhangisa, umcimbi, amava, ama-ejensi we-PR kanye nezimpendulo eziqondile, izixazululo ze-MarketingPilot zenza lula ukusebenza futhi zithuthukise ukukhiqiza kanye nenzuzo edlulele ngaphezu kwezinhlelo zokuphathwa kwe-ejensi yendabuko.
Tags: ukumaketha-Microsoftimicrosoft crmMicrosoft Dynamicsimicrosoft dynamics crm
I-Ebook yamahhala: Lalela Up! Ukulalelwa Komphakathi Kwebhizinisi Elihlakaniphile